Chicken Sandwich and French Fried with Fruit (ကြက်သား ပေါင်မုန့်ညှပ် နဲ့ အာလူးချောင်းကြော် နှင့် အသီးများ )
ကြက်သားပြားလုပ်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ (Ingredients Chicken Patti)
ကြက်ကြိတ်သား ၁၅၀ ဂရမ်
Ground chicken 150 g
ဆား ၁/၂ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
Tarragon မှုန့် ၁ ဇွန်း လက်ဖက်ဇွန်း
ဆီ ၃ ဇွန်း ခွဲ လက်ဖက်ဇွန်း
Oil3½ tsp
၁။ ဖန်ဇလုံ အကြီးထဲ ထမင်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံး ထည့်ပြီး သေချာ အရသာနှံ့အောင် လက်ဖြင့်သေချာနယ်ပါ။
1. Inabig glass bowl add all ingredients and mix well.
၂။ နယ်ထားသော ကြက်သားများကို လက်သီးဆုပ်အရွယ်ညီညာလုံးပါ။ အာဗင်ကို ၂၀၀ ဒီဂရီ အပူပေးထားပါ။ မကပ်သော အကင်ဗန်းထဲ အသားလုံးများကို အသေချာညီညာ ပြားပြီး တင်ပါ အပေါ်မှနေ ဆီ၂ ဇွန်း ဖြင့် ဖျန်းပါ မကင်ခင်။
2.Makeafit size balls. Heat the oven 200ํ̊. On non-stick tray put all meat ball and flatten equally so they cook well and drizzle with2tsp of oil on top.
၃။ အသားပြားများ အညိုရောင်သန်း လာလျင် တစ်ဖက်ကို လှန်ပေးပါ။ ၇-၁၀ မိနစ်လောက်ဆိုရပါတယ်။ အသားကို အရမ်း ခြောက်သွားတယ့် အထိမကင်ပါနှင့်။
3.When chicken patties are golden brown turn to other size for 7-10 minute more in the oven. Don’t overcook the patties to dry.
ပေါင်မုန့် အသားညှပ် နှင့်တစ်ခြား ပါဝင်ပစ္စည်း (Ingredients sandwich and other)
အာလူးချောင်း ၁၅၀ ဂရမ်
French Fried 150 g
ဆလတ်ရွက် ၅ ရွက်
Lettuce5leaves
ချီစ် ၄ ပြား
ပေါင်မုန့် ၄ ခြပ်
ထောပတ် လိုသလောက် (ပေါင်မုန့်သုပ်၇န်)
Butter much need to butter bread
Peanut Butter ၁ ဇွန်း ခွဲ စားပွဲဇွန်း
Peanut Butter 1 ½ tbsp
ခရမ်းချဉ်သီး ၂ လုံး (ခတ်ပါးပါး အကွင်းလိုက်လှီးထားပါ)
Tomato2no (cut thinly round slice)
မုန့်လာဥနီ ၁/၂ ပိုင်း (အခွံခွာ အချောင်းလေးတွေ လှီးထားပါ)
Carrot half (peel and straight cut)
သခွားသီး ၁/၂ ပိုင်း (အခွံခွာ ပြီး အချောင်းလေးတွေ လှီးထားပါ)
Cucumber half (peel and straight cut)
ဖရဲသီး တစ်ဝက်ခွက် (အလုံးလေးတွေ ဇွန်းနဲ့ ခြစ်ယူထားပါဝ
Watermelon ½ cup (makeaball shape cut)
ကြက်မောက်သီး နာနတ် အစာသွပ် ၄ ခု (ထက်ပိုင်း ပိုင်းထားပါ)
Rambutan stuffed with Pineapple4pieces (cut in half)
မယ်ယိုနစ် ၁ ဇွန်း ခွဲ စားပွဲဇွန်း
Mayonaise 1 ½ tbsp
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ ၁ ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
ဆီ အာလူးကြော်ရန် လိုသလောက်
Oil for frying French fried
၁။ ပေါင်မုန့်ကို မီးကင်ပါ။ တစ်ခြမ်းကို ထောပတ် သုပ်ပါ၊တစ်ခြမ်းကို Peanut butter သုပ်ပါ။ ပြီးလျင် ဆလတ်ရွက်၊ မယ်ယိုနစ် ဆန်းပါ၊ အသားပြား၊ ခရမ်းချဉ်သီး ဆော့၊ချိစ် နှင့် ခရမ်းချဉ်သီး ဖတ်များ သေချာစီတင်ပါ။ ကိုင်စားရတာလွယ်ကူအောင် ၃ ပိုင်း ပိုင်းပြီး ထမင်းဘူးထဲ ထည့်ပါ။
1.Toast the bread. Butter one slice of bread and the other slice peanut butter. On butter bread laid lettuce, mayo, chicken patty, ketchup, cheese and tomato slices. Able to hold well and easy cut into3sandwiches.
၂။ ဆီအိုး ပူအောင်တည်ပါ။ ဆီပူလာလျင် အာလူးချောင်းများ ကိုထည့်ကြော်ပါ။ ရွှေရောင်သန်းလို့ ကျွတ်ရွလာလျင် ရပါပြီး။ ဆီစစ်စက္ကူပေါ်မှာတင်စစ်ပါ။
2.Heat oil inapan. Add French Fried and fried until golden brown. Drain them on paper towel.
၃။ ထမင်းဘူးထဲ ပေါင်မုန့်အသားညှပ်၊ အာလူးချောင်းကြော်၊ မယ်ယိုနစ် နှင့် ခရမ်းချဉ်ဆော့ ရော၊ အသီး၊ သခွားသီး နှင့် မုန့်လာဥများ ကိုသေချာ ညီညာ စီပြီး အဆင်ပြေသလို ထည့်ပေးပါ။
3.In the lunch put sandwich, French fried, mix of mayo and ketchup, fruits, vegetable the way you want.
Avocado Tuna Rice Ball with Cheese Meat Ball (ထောပတ်သီး တူနာငါး ထမင်းလုံး နှင့် ချီစ် အသားလုံးကြော်)
Chicken Shrimp Ball Striker Lunch ( ကြက်သားပုစွန်လုံး တိုက်စစ်မှူးနေ့လည်စာ )
Fried Prawn & Chinese Sausage with Scramble Egg (ပုဇွန်ဝက်အူချောင်းကြက်ဥကြော်)
Garfie Lunch with Breaded Chicken Breast (ကြောင်ဝါကြီး ကြက်ကြော် နေ့လည်စာ)
Halloween Lunch Box (Halloween ကလေး ထမင်းဘူး(၁))
Halloween Lunch Box (Halloween ကလေး ထမင်းဘူး(၂))
Mom’s Chicken Rice Lunch (မေမေကြီး ကြက်ဆီထမင်း နေ့ လည်စာ)
Mom’s Chicken Teriyaki with Sushi Lunch (မေမေ့ တာရီယာကီ ကြက်သား နှင့် ဆူရှိ နေ့ လည်စာ)
Mom’s Fusion Prawn Gim – Bab Lunch (မေမေ့ ပုစွန် ထမင်းလိတ် နေ့ လည်စာ)
Mummy’s Shan Sea bass Lunch (မေမေ့ ရှမ်းငါးထမင်းနယ် နေ့လည်စာ)
Sandwich ၊ ကြက်အူချောင်း နှင့် အာလူးချောင်းကြော်
Sweet Soy-Glazed Chicken (ကြက်သားပဲငံပြာရည်အချိုနှပ်)
Teriyaki Chicken Noodle with Boiled Egg and Grilled Sausages (တယ်ရီယာကီကြက်သားခေါက်ဆွဲ၊ ကြက်ဥပြုတ် နဲ့ကြက်အူချောင်းကင်)
Tuna Pasta with Cheese and Chicken Sausages (တူနာပါစတာ နှင့် ချိစ်)
ငါးအသားလွှာ အကြွပ်ကြော် နှင့် ကညွှတ် ထမင်းဘူး
စင်ကာပူစတိုင် ကြက်ဥခေါက်ဆွဲကြော် နှင့် အာလူးကြော်
၀က်နံရိုးကင် နှင့် ကြက်ဥသီးရွက်စုံလိပ် ထမင်းဘူး
၀က်သားပြားကြော် နှင့် ချိစ်ဆမ်ဝေ့